ရဲ့ရင့်သက်ဇွဲ – さようなら – ဆာယိုနာရား | MoeMaKa Burmese News & Media
နီ လာမိုးေ ဆွ - ငြ မ်း
မင်းကိုနိုင် - “ ဗိုလ်အောင်ဒင်ကြီး စန္ဒယားတီးနေပြန်ပြီ ”
(အောင်ဝေး) - ငါ တို့ခွ ပ်ဒေါ င်းအ လံ ပြ န်ပေး
ရဲ့ရင့်သက်ဇွဲ – さようなら – ဆာယိုနာရား
တို့ နှစ်ယောက် လက်တွဲလျှောက်ခဲ့ဖူးကြတယ်နော်
တိုကျိုမြို့ ရဲ့ လမ်းများပေါ်မှာ
ရှင်ဂျူးကု တာကာဒါနိုဘာဘာ အရပ်က
ဂျပန်ရိုးရာ ဆာကေး အရက်ဆိုင်လေးတွေ
တို့ နှစ်ယောက်ပျော်မြူးခဲ့ကြဘူးတယ် ..။
မင်းဆိုပြခဲ့ဘူးတဲ့ Ue O Muite သီချင်းသံနဲ့ 
မင်းကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Nagabuchi Tsuyoshi -kampai
ငါဟာ တလူးလူးတလိမ့်လိမ့်မျောပါနေရင်း
တို့ မင်းနဲ့ ဆုံတွေ့ ခဲ့ရတယ်
ဘယ်တော့မှ မမေ့ဘူး ယုခိစံ..
နှစ်တနှစ်ရဲ့တခုသော
ပိတောက်နဲ့ ချယ်ရီ အလှချင်းပြိုင်ကြ
ပိတောက်နဲ့ ချယ်ရီ အချစ်ခြင်းပြိုင်ကြ
ပျော်လို့ အားမရသေးခင်မှာ
မင်းရဲ့ စိတ်ကိုနားလည်ဘို့ ကြိုးစား
မင်းမိဘတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုများ
တို့ ရဲ့ လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့
မင်းရဲ့ လက်များက တဖြေးဖြေးပြေလျော့လာ..
ငါ့ရဲ့ အသက်ဝိညာဉ်ကို ဆွဲနှုတ်ယူငင်သွားသလိုပဲ.။
လမ်းတွေက ကောက်ကွေ့ လွန်းတယ်
မင်းနဲ့ ဝေးရာ …. အဝေးဆုံး
အဝေးဆုံး အဝေးဆုံး ကို ကိုယ်ထွက်သွားခဲ့ပြီ
နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ် …. ဂွတ်ဘိုင်